fekitari yedu yabudirira ICTI International Toy Association advertising, ISO9001: 2008 yepamusoro utariri hurongwa advertising, EU BSCI tidzivise evanhu basa advertising uye FSC advertising. chigadzirwa yedu neeSultan zvinosanganisira matoyi dzidzo, mudhori dzimba, chitima rinovira, emapuranga Puzzles, zviridzwa, yematanda kutigumbura etc. To kutungamirira mukomana ose & musikana wakanaka, inofara, zvinoorora pauduku muri zvatinogona zvido.
All mishonga yedu anogadzirwa pamwe maitiro yepamusoro uye pfungwa zvizere kusangana kwedu vatengi kuti zvirevo. Tiri yakazaruka kuti OEM zvigadzirwa maererano vatengi 'nepurani. With mupfumi ruzivo uye ruzivo nyanzvi pamusoro matoyi & rwokugadzira, isu achakupa pfungwa yakanaka, iyo kuti zvigadzirwa zvako kwakachengeteka kupfuura miedzo yose zvakafanira uye vane rokutengesa zvakanaka mumusika.